गृहमन्त्रालयले गर्यो ६ जना सिडिओको सरुवा, को कहाँ पुगे ? (नामसहित) « Kathmandu Pati
गृहमन्त्रालयले गर्यो ६ जना सिडिओको सरुवा, को कहाँ पुगे ? (नामसहित)
प्रकाशित मिति : २०७६, १७ मंसिर मंगलवार १७:१७
काठमाडौं – गृहमन्त्रालयले ६ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को सरूवा गरेको छ । गृहमन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै छ जना सिडिओको सरूवा गरेको जानकारी दिएको हो ।
सरूवा हुनेहरूमा नारायण प्रसाद भट्टराई, नारायण प्रसाद भट्ट, जितेन्द्र बस्नेत, हुमकला पाण्डे, डिजन भट्टराई र लक्ष्मण बहादुर खड्का रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा कार्यरत भट्टराईको जिप्रका चितवनमा सरूवा गरिएको छ ।
जिप्रका भक्तपुरमा कार्यरत भट्टलाई मकवानपुर, जिप्रका चितवनका कार्यरत बस्नेतलाई जिप्रका पर्सा सरूवा गरिएको छ भने पाण्डेलाई जिप्रका भक्तपुर सरूवा गरिएको छ । त्यसैगरी जिप्रका लमजुङमा कार्यारत डिजन भट्टराईलाई अध्यागमन विभाग कालिकास्थान सरूवा गरिएको छ भने अध्यागमन कार्यालय त्रिअविका खड्का जिप्रका लमजुङ सरूवा भएका छन् ।